Ma doonaysaa in aad ka rujin Samsung Galaxy S4? Waxaad tahay meeshii saxda ah. Tilmaan-bixiyahan waxa aad ku socon doona habka buuxa rooting isticmaalaya Oden iyo CWM.
Ka hor inta aadan ka rujin aad Samsung Galaxy S4, waxaad u baahan tahay in la ogaado waxyaabaha hoos ku qoran:
1) Kan waa hage loogu talagalay oo kaliya Galaxy S 4 (GT-I9500). Haddii aad rabto in aad ka rujin qalab kale oo Android, aad bogga qaldan. Fadlan si naxariis leh u raadiso model qalab aad ee website-kayaga.
2) afjarno qalab aad maqani waxa damaanad aad telefoonka ee.
3) Back oo dhan xog ku saabsan qalabka sida precause ah, si looga hortago in xogta laga badiyay.
4) Waxaad tahay in ay u qabanayaan ee adiga ku gaar ah khatarta.
Next, aynu hubi sida ay u wada rujin aad Samsung Galaxy S4 (GT-I9500) tallaabo-tallaabo.
Tallaabooyin sahlan ee aad soo afjarno I9500 Samsung Galaxy S4
Tallaabada 1. hoos Volume ee Down + Center Home + Power badhamada isku mar ku saabsan 5 ilbiriqsi Taleefoonkaaga dami, iyo saxaafadda.
Tallaabada 2. Marka screen digniin u muuqataa, sii daayo badhamada oo dhan, oo markaas Volume ee tubbada button in ay galaan Download Oden ah hab.
Tallaabada 3. Hadda heli aad Galaxy S4 xiran computer iyadoo cable micro USB-.
Tallaabada 4. Next, download cofface_I9500_cwm_recovery_en_new . ClockworkMod hadda diyaar u GT-i9500, qaran SPH-L720, oo lagu daydo T-Mobile SGH-M919 (Waxaan doonaa sii xariirta this page haddii ay jiraan kuwa deggan, waayo, tusaalayaal kale).
Sidoo kale download Odin3 , SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones , iyo CWM-SuperSU-v0.99 .
Tallaabada 5. siibka file ee Odin3v185 ka dib markii aad ka soo dejisan waxaa on your computer, oo ay maamulaan file odin3 v1.85.exe by double-magcaabo ku yaal.
Marka hore, hubi jaalaha ah ku iftiimiyay sanduuqa. Haddii aadan u arkaan, in aad u baahan tahay si loo soo dajiyo drive ka USB Samsung in aad soo bixi hore, iyadoo labo gool lagu magcaabo darawallada USB faylka Samsung EXE. Markaas barkinta xira aad telefoon si kombiyuutarka. Hadda waa in aad fiiri sanduuqa iftiimiyay jaalaha ah.
Hadda sax PDA iyo dhirtuba ay u soo kabashada CWM aad hore soo bixi (cofface_I9500_cwm_recovery_en_new.tar), ka dibna riix badhanka Start si ay u bilaabaan flash kabashada CWM in aad telefoonka. Tani iftiimiyo doonaa CWM kabashada caadadiisu aad Galaxy S4 iyo telefoonka reboot doonaa.
Marka aad aragto PASS! (Muujiyay in talaabada 4), waxa ay la micno tahay in wax walba si guul leh u baxay.
Tallaabada 6. Marka aad telefoonka ku dhameysatay kaalinta rebooting, aad nuqul kartaa file u SuperSU zip (CWM-SuperSU-v0.99.zip) aad soo bixi ka hor si aad telefoon. Waxaa lagu dhejiyo kartaa meel kasta oo aad Galaxy S4. Waxaad si fiican abuuri lahaa folder cusub, waayo, aad telefoon.
Tallaabada 7. Switch off telefoonka, ka dibna si wadajir ah hoos u hay Volume Up + Center Home + Power badhamada.
Tallaabada 8. Marka logo Samsung ay u muuqataa ku saabsan telefoonka ee shaashadda guriga, waxaad u sii daayo karaa batoonka, Laakiinse ay xajiyaan haysta hoos Volume badhamada Up + Center Home.
Tallaabada 9. Marka aad telefoonka waa in CWM Recovery, doortaan "rakibi zip ka sdcard" oo ka jaftaa batoonka.
Tallaabada 10. Next, doortaan "dooran zip ka sdcard" oo mar kale ka jaftaa batoonka.
Tallaabada 11. In la sii wado, doortaan "0 /" hagaha iyo weeraray batoonka.
Tallaabada 12. Markaas ka heli faylka zip SuperSU in aad soo guuriyeen badan si aad telefoon hore oo ka dhacay batoonka.
Tallaabada 13. Dooro "Haa" oo ka dhacay batoonka.
Tallaabada 14. Tani rakibi doonaa binaries su iyo SuperSU superuser app ku saabsan telefoonka. Tani muhiimad ahaan "xididada" aad Galaxy S4.
Tallaabada 15. Marka "xidid" waa in ka badan, waxaad samayn kartaa eeg "sameeyey!". Markaasuu ku laabto menu ugu weyn oo ay doortaan "reboot nidaamka hadda", iyo button Power ku dhacay. Your Galaxy S4 reboot doonaa.
Tallaabada 16. Marka aad Galaxy S4 ayaa la rebooted, waa in aad ka heli app SuperSU in aad app khaanad.
Tallaabada 17. Click in uu ordo app SuperSU hal mar iyo u cusbooneysiin binaries ah.
Tallaabada 18. Waxaad xaqiijin kartaa in aad xidid buuxa soo degsado iyo furitaanka app rujin sida Titanium kaabta app (taas oo aan aad ugu boorinayna in ay taageerto kor / keydsho / un-rakibidda barnaamijyadooda aad).
Waa in aad Superuser ah codsi suuqa kala pop-up! Hambalyo, aad si buuxda u rujin aad Galaxy S4!
Root Samsung Galaxy S5 in wax walba la hoos Control
Root Android Phone / Tablet si buuxda u Koontorool Android Life
Sida loo xidid Samsung Galaxy Mini S5570
> Resource > Talooyin Root > Sida loo xidid Your Samsung Galaxy S4 (Isticmaalka Oden iyo CWM)